Danab dhaliyaha gaaska
Sida ay u shaqeeyaan Generator-yada taagan iyo sababta ganacsi kasta ugu baahan mid
Matoorrada taagan waa badbaadiye inta lagu jiro korontada oo ka go'da burburka, duufaanka, iyo arrimo kale. Inta badan suuqyada, isbitaalada, bangiyada iyo ganacsiyada waxay u baahan yihiin koronto aan kala go 'lahayn habeen iyo maalin. Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya koronto-dhaliye caadi ah iyo koronto-dhaliye heegan ah ayaa ah in heeganka ...
Waa maxay saamaynta koronto-dhaliye naafto ah oo dayactir la'aan ku ah mashiinka ..
Matoor dhaliyaha naaftada ah ee aamusan ayaa looga baahan yahay inuu sameeyo dayactirka iyo dayactirka, koronto-dhaliyaha naaftada ah ee aamusnaanta hawlgalka shaqada, aamusnaanta dhaliyaha naaftada oo yaraada, cimri dherer adeeg, kuwaas oo ah iyo aamusiyaha dhaliyaha naaftada ah dayactirka saxda ah iyo dayactirka waxay leeyihiin xiriirkan weyn. 1. Qaboojinta syste ...
5 Sababood oo ku Saabsan Maxaad ugu Maalgashan kartaa Generator-ga Diesel
Sanado badan, matoorrada naaftada ah ayaa loo isticmaali jiray baahiyaha ganacsi iyo kuwa degsi labadaba. Haddii aan ka hadalno oo keliya qaybta ganacsiga, waxay ka ciyaaraan door aad muhiim ugu ah dhinacyo badan. Ha noqoto warshadaha caafimaadka, warshadaha cuntada, ama xitaa warshadaha dharka, isticmaalkooda sifiican ayaa loo wada garanayaa ...
Maxay yihiin siyaabaha loo nadiifiyo qaybaha koronto-dhaliye?
1. Nadiifinta wasakhda saliida markay wasakhaynta saliida dusha sare ee qaybaha ay qaro weyn tahay, waa in marka hore la xoqaa. Habka koronto-dhaliye gacan-labaad ah oo lagu nadiifiyo habka, guud ahaan nadiifinta dusha sare ee qaybaha saliidda, dheecaannada nadiifinta ee sida caadiga ah loo isticmaalo waxaa ka mid ah dheecaanka nadiifinta alkaline iyo qalabka synthetic detector ...
Liiska hubinta badbaadada koronto-dhaliyaha: Tallaabooyinka taxaddarrada isticmaalayaasha genset waa inay ka digtoonaadaan
Matoor-dhaliye waa qalab waxtar leh oo lagu haysto guriga ama warshadaha. Generator-ga dhaliyaha ayaa ah saaxiibkaaga ugu fiican inta lagu jiro koronto la'aan, maaddaama aad ku tiirsan tahay qalabkan si mashiinnadaadu u sii socdaan. Isla mar ahaantaana, waa inaad ka taxaddartaa markaad u adeegsaneyso qalabkaaga guriga ama warshad. Ka gaabinta in sidaas la sameeyo c ...
Doorka matoorrada naaftada ah ayaa rakibay dareeraha heerkulka
In geeddi-socodka isticmaalka matoorrada naaftada ah, macaamiisha waa inay fiiro gaar ah u yeeshaan heerkulka qaboojiyaha iyo shidaalka, macaamiil badan ayaa qaba su'aashan, sida loola socdo heerkulka? Ma u baahan tahay inaad sidato heerkulbeeg? Jawaabtu runti waa mid aad u fudud, in lagu rakibo dareeraha heerkulka ...
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato ka hor intaadan iibsan hal set Diesel Generator
Waa maxay Generator-ka naaftada? Matoor naafto ayaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro tamar koronto iyadoo la adeegsanayo matoor naaftada ah iyo koronto-dhaliye. Matoor koronto dhaliyaha ayaa loo isticmaali karaa inuu ahaado koronto bixiyaha degdega ah haddii ay dhacdo koronto go'an ama meelaha aysan ku xirneyn korontada. Noocyada ...
Waa maxay faraqa u dhexeeya kW iyo kVa? Farqiga koowaad ee udhaxeeya kW (kilowatt) iyo kVA (kilovolt-ampere) ayaa ah isirka awooda. kW waa halbeegga awoodda dhabta ah kVA waa unug awood muuqata (ama awood dhab ah oo lagu daray awood-firfircoon). Awoodda korantada, illaa aan la qeexin oo la aqoon, waa kursi ...
Qalabka Dayactirka Generator-ka
Marka qalabka korontada uu xumaado macnaheedu maahan inaad adiguna adigu kari karto. Tani waligeed maahan wax ku habboon oo waxay dhici kartaa marka shaqo muhiim ah ay socoto. Marka korontadu madoowdo iyo wax soo saar xilliyeedka oo kaliya aan la sugi karin, waxaad u weecataa koronto-dhaliyahaaga naaftada si aad u xoojiso qalabka iyo tas-hiilaadka ...
Heerkulka mishiinka naaftada ayaa aad u sareeya. Ma laga saari karaa heerkulka?
Sidee buu u shaqeeyaa heerkulbeeggu Waqtigan xaadirka ah, makiinadaha naaftada ah waxay inta badan isticmaalaan heerkulbeega wax oo leh waxqabad shaqeynaya oo deggan. Marka heerkulka biyaha qaboojintu ka hooseeyo heerkulka la qiimeeyay, waalka qalabka korantada ayaa xiran oo biyaha qaboojinta waxaa lagu dhex wareejin karaa oo kaliya mashiinka naaftada wa yar ...
Maalinta Caalamiga ah ee Haweenka
Maalinta Caalamiga ah ee Haweenka Farxada leh! Waad ku mahadsan tahay dhamaan asxaabteena dumarka ah. Awoodda Hongfu waxay dhammaantiin u rajeyneysaa dumar hodan ah, ruux qani ku ah: milicsiga, rajo-gelinta, farxadda, jacaylka hodanka ah: badiyaa wuxuu leeyahay macaan, kalsooni isku kalsoon; hodan: iyo nolosha riyada, keligeed ayaa mas'uul ka ah. Maalin farxad leh haweenka!
Tilmaanta Awoodda ee Hongfu ayaa kuu tilmaameysa sida loo sameeyo jenetkaaga si uu ugu sii jiro waxqabadka weyn
Saldhigyada is-gaarsiinta ee is-madax-bannaan ee ay soo saartay Hongfu Power ayaa helay codsigooda maanta, labadaba nolol maalmeedka iyo wax soo saarka warshadaha. Iyo inaad iibsato koronto-dhaliye taxane AJ ah ayaa lagula talinayaa inuu yahay isha ugu muhiimsan iyo keyd ahaan. Cutubka noocan ah waxaa loo isticmaalaa in lagu bixiyo danab warshadeed ama nin ...
240kw Generator, Generator Awood dhaliyaha, Generator Iib ah, Generator 125kva, Qiimaha Generator, Yar dhaliyaha 6kw,
Marka loo eego Baahiyahaaga, adiga kuu habee, oo ku siiya alaabooyin aad u qiimo badan